ठगीका आरोपीसँग पुलिसले डेढ करोड माग्यो, ११ लाख पायो पनि, त्यसपछि आफै ... , Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
ठगीका आरोपीसँग पुलिसले डेढ करोड माग्यो, ११ लाख पायो पनि, त्यसपछि आफै ...
एजेन्सी । अनलाईन ठगी मुद्दाका एक आरोपीलाई पक्राउ गरेपछि दिल्ली प्रहरीले उसलाई छोड्नका लागि डेढ करोड रुपैयाँ माग्यो । आरोपीकी श्रीमतीले एक करोडमा डिल फाइनल गरिन् ।
पहिलो किस्ताका रुपमा ११ लाख रुपैयाँ पनि प्रहरीलाई दिइयो । बाँकी पेमेन्ट भुक्तानी मंगलबार दिउँसो हुनेवाला थियो । तर, दबै पक्षबीच कुरा विग्रियो ।
दिल्लीको मौर्या एन्क्लेभ क्षेत्रमा उनीहरु झगडा भए पनि विषय प्रहरीसम्म पुग्यो । यसपछि जे खुलासा भयो त्यसले दिल्ली प्रहरीको एक पटक फेरि बद्नाम गराएको छ । र एक अर्का व्यक्तिलाई बन्धक बनाएर राख्ने तथा जबरजस्ती फिरौतीको आरोपमा तीन प्रहरी, असिसेन्ट सब इंस्पेक्टर सुबे सिंह, कस्टेबल इन्दू परमार र कस्टेबल अजयलाई गिरफ्तार गरिएको छ ।
चौथो गिरफ्तारी सचिनको भएको हो । गिरफ्तारीपछि रणहौल थानाका एसएचओलाई पनि लाइ हाजिर गरेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिइएको छ ।
२८ सेप्टेम्बरमा छत्तीसगढमा अनलाई ठगीको मुद्दा दर्ता भएको छ । ६ आरोपी थिए । त्यसमध्ये ५ पक्राउ परिसकेका थिए । छैटौं आरोपी दिल्लीको प्रदीप प्रधानलाई तीन प्रहरीले पक्राउ गरे र उत्तमनगरस्थित सचिनको घरमा राखे । यसपछि उनीहरुले प्रदीपकी श्रीमती नेहासँग सम्पर्क गरेर श्रीमानलाई छोड्नका लागि डेढ करोड रुपैयाँ मागे । १ करोडमा डिल भयो । नेहाले आइतबार ११ लाख रुपैयाँ पहिलो किस्ताका रुपमा दिइन् पनि ।
बाँकी रकम मंगलबार दिउँसो मौर्या एंक्लेभमा दिइने तय भएको थियो । यहाँ नेहा आफुसँगै २ अरु मान्छेलाई लिएर आई । नेहाले रुपैयाँ दिनुभन्दा पहिला श्रीमानलाई देखाउन भनि । यही कुरामा प्रहरी, नेहा र अन्य मानिसबीच भनाभन भयो । कुरा मारपिटसम्म पुग्यो । यहीबीचमा कसैले प्रहरी कन्ट्रोल रुमलाई सूचना दियो । स्थानीय प्रहरी घटनास्थल पुग्यो ।
यसपछि प्रहरीले तीन प्रहरीलाई पक्राउ गर्यो । र नेहाले प्रहरीसँगको बयानमा सबै कथा भनि ।